Mormii haaraa Ambootti uumameen namoonni ajjeefama - News and Current Affairs - Maroole Online Forum
Mormii haaraa Ambootti uumameen namoonni ajjeefama
Maroole 2017-10-26 15:24:04 UTC #1
Akka jiraattonni magaalaa Amboo bilbilaan dubbifne jedhanitti, konkolaattota sukkaara fe’anii magaalaattii keessa darbaa turan, kan jiraattonni seeran ala jedhani shakkan dhaabsisuuf ture kaleessa galgala irraa kaasee uummanni karaa cufuu kan eegale.
Wayita amma kutaalee biyyattii hedduu keessatti hanqinni sukkaaraa ni mul’ata.
Sukkaara KG 1 hanga qarshii 70tti bitaa akka jiran jiraattonni bilbilaan nutti himanii jiru. Kun kanaan osoo jiruu, sukkaarri seeraan ala fe’amee bakka biraa geeffamuu hin qabu jechuun ture jiraattonni magaalatti kaleessa galgala karaa cufuu kan eegalan.
“Karaan guddichi magaalattii qaxxaamuruu fi karaaleen keessoo hundi cufamanii, poolisoota Oromiyaa waliin ta’uun sukkaara seeraan ala dabarfamaa jira jedhame eegaa bulle,” jedhu jiraataan maqaan isaanii akka hin dhahamne nu gaafatan tokko.
Ganama naannoo sa’aatii tokkootti humni uffannaa raayyaa ittisa biyyaa uffatan bakka biraatii dhufuun dhukaasa baneen yoo xiqqaate namootni 10 ol yoo ajjeefaman, hedduun madaa’uu nutti himan jiraattonni.
“Ani kanan ofii kooti mirkaneeffadhe namoota shan, garuu kan ajjeefaman nama hedduu dha” nun jedhan jiraatan bilbilaan dubbifne tokko.
“Miseensonni poolisii federaalaa lama dhagaan reebamanii ajjeefamuu isaanii argeera,” kan nuun jedhe ammo jiraataa biraati.
Lakkoofsa namoota du’anii BBC’n mirkaneeffachuu hin dandeenye.
Lubbuu namoota qofa osoo hin taane qabeenyaa irras miidhaan kan gahe yoo ta’u, konkolaattonni fe’uumsaa warshaa simiintoo dangootee lama abiddaan barbadaa’anii jiru.
“Maqaa hiriiraa fi sakkatta’insaa sukkaaraatiin walqabatee seermaleessuummaan akka babal’atu godhuun dargaggoota keenya kakaasanii gara jeequmsaatti oofuun balaan akka qaqabu qaamota taasisaan ni balaaleffanna,” jedhan Obbo Addisuun barreeffama isaaniitiin.
Ammaaf haalli jiru xiqqoo kan tasgabbaa’e fakkaata, garuu karaan akkuma cufametti jira uummannis manatti ol hin deebine, namoonni hedduun ammas ajjeefamu danda’u jechuun soda qaban nutti himanii jiru jiraattoonni.
Source: Mormii haaraa Ambootti uumameen namoonni ajjeefaman